December | 2017 | Hassan Mudane
December 24, 2017 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Inta badan go’aanada qar-iskatuurnimada ahi, ee aynu qaadano waa kuwa dhaca xayndaabyada kala duwan ee nolosha. Maxaad sameyn laheyd haddii ay ku soo mari laheyd xaalad tallan, taas oo ku jaan go’an kala doorashada laba daran, sida tan oo kale; Adiga iyo Sahra waxaad saaxiibbo aheeydeyn ilaa yaraantiinii, dheh 10 sano ka hor inta aadan […]
“Ma xeeriyo Aadanaha garaad laga xidhay cilmiga.” -Abdishukri Haybe Maalmahii la soo dhaafay waxaan faysbuugayga soo dhigay qoraallo ku saabsan dhacdadii Abdirahman Abdishakur Warsame iyo sawirka Daahir Calasow. Iyada oo ujeedkuna ahaa muujinta aragtidayda, aniga oo aan ka tallaabin xayndaabka xeerka iyo anshaxa kala feker duwanaanshaha bini’aadamka. Waxaan rumaysanahay in qof walba uu u madax […]
TALLANKA DHALLINYARADA SOOMAALILAAN
December 17, 2017 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Maxay tahay farqiga u dhexeeya Somalinimada iyo Somalilandernimada? Maxaa diidaya in qofka noqdo, labaduba Somali iyo Somalilander? Aniguse waxaan ku dooddayaa arrinka ku saabsan kala garasho la’aanta Somalinimada iyo Somalilandernimada in ay tahay wax dib ugu laabanaya maanduub ay maleegeyn siyaasiyiinta Soomaalilaan. Wixii ka dambeeyey 1991, siyaasiyiintii xilligaas saarnaa masrax siyaasaddeedkii Soomaalilaan; ahna wadayaashii […]
December 15, 2017 ·	by Hassan Mudane ·	in Faallo	· Leave a comment
Ma sahlana in aynu sameyno go’aan qar-iskatuurnimo ah, oo ka madax bannaan xayndaabka caadifadda iyo maantuska. *** Ka soo qaad in aad darawal ka tahay gaari rakaab ah, oo ay kula saaran yihiin 8 qof. Adiga oo maraya waddada Maka-Almukarama ayaa gaarigii fariin goostay, hortaada waxaa taagan gaari ay saaran yihiin ciidamada dowladda; dhanka midig […]
Goorta aynu dhax taagan nahay xaaladda ‘kala doorashada laba daran,’ inta badan go’aanada aynu doorano maahan kuwa qumman. Had iyo jeer waxaa nagu dabran waxa aynu rumaysan nahay sida diin, dhaqan, xeerar caalami ah iwm. Haddaba, go’aan noocee ah ayaad qaadan laheyd haddii aad la kulmi laheyd xaaladdan oo kale; *** Kaba soo qaad adiga […]
Waligaa ma qaadatay go’aan qar-iskatuurnimo ah? Haddii aad qaadatayna maxaad ku salaysay? Go’aanada qaar ma sahlana qaadashadooda sidaas darteed qofka waa in uu rogrogaa, isbarbardhigaa, kana fikiraa sidoo kale cabiraa culeyska uu yeelan karo go’aanka. Bal iga hoo go’aan qar-iskatuurnimo ah; *** Waxaa dagaal dhex maray dowladda waqooyiga kuuriya iyo maraykanka, adigana waxaad u shaqeynaysay […]
Goorta ay na hortaallo laba doorasho oo kala daran; go’aannada aynu qaadanno hadba waxa ay ku xiran yihiin sida aynu u qiimeynay saameynta uu yeelan doono go’aanka. Haddaba, go’aan noocee ah ayaad qaadan laheyd haddii ay ku soo mari laheyd xaaladdan oo kale: *** Kaba soo qaad in aad ku nooshahay adduun qof walba saacadiisa […]